Nagu saabsan - Wuxi Songhu Xinrui Makiinado Co., Ltd.
Wuxi Songhu Xinrui Makiinado Co., Ltd. sidoo kale loo yaqaan Wuxi Hang Seng Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2007 waxaana la aasaasay in ka badan toban sano. Waa wax soo saar xirfad leh, iibinta noocyo kala duwan oo mashiinno wax shiidaya, soosaarayaasha jajaban ah. Shirkaddu waxay ku taalaa Wuxi, oo ah halka ugu horeysa ee warshadaha qaranka. Mawqifka juquraafi ahaaneed ee shirkaddu wuu ka sarreeyaa, oo ku dhagan xarunta tareenka xawaaraha sare ee Huishan, gaadiid ku habboon. Shirkaddu had iyo jeer way u hoggaansameysaa.
"tayada marka hore, marka hore macaamilka, adeegga tayada leh, u hogaansanaanta ujeedada qandaraaska." Sumcadda wanaagsan ee alaabooyinka sinnaanta sare leh, adeegga tayada sare leh, alaabtu si fiican ayey ugu iibiyaan dhammaan gobollada, magaalooyinka, ismaamulada gobollada waxaana loo dhoofiyaa Afrika iyo dalal kale, iyagoo si kal iyo laab ah ula shaqeynaya ganacsiyada gudaha iyo shisheeyaha ee wada-guuleysiga.
Wuxi Songhu Xinrui Makiinado Co., Ltd.
Baaxadda Isticmaalka Ku habboon birta caagga ah, looxyada suunka, qoryaha bey'ada, xariiqa xagalka, silig gacmeed caag ah oo dhagxan ah, astaan, gidaar, tuubbo, XPS, qaab dhismeedka, guddiga xumbada, SPC, dabaqa WPC, lebenka xajmiga
Macaamiisha marka hore, dadka u janjeedha, kooxda heerka koowaad ee koox, waxay abuuraan astaan ​​kiniin ah, tikniyoolajiyadda sayniska oo ah awoodda wadista, tayada badbaadada
Ruux hal abuur leh, u doodida tartanka, macaamilka ugu horeeya, iskaashiga kooxda, ganacsiga iyo istiraatiijiyadda guuleysiga shaqaalaha.
Ka qaybgal Bandhiga Burma Rubber & Plastics